သင်၏အောင်မြင်သောကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်၏သော့ချက် ၅ ခု Martech Zone
ငါဒီနေ့သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုပြီးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ရပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်တောင်းခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Dan Schawbel မှ ပို၍ ကောင်းသောအဖြေပေးသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူ... ဒါကြောင့်သူ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လော့။ ငါပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းငါပြုခဲ့သောအရာကိုငါ့အကြံအစည်မျှဝေပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုရိပ်မိမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ဆက်ပါ - ငါထင်တာကတော့ရှေးရှေးတွေငါ့ကိုတွေ့တဲ့အခါတအံ့တသြဖြစ်နေတယ်။ ငါဟာကြီးမားတယ်၊ ကြမ်းတမ်းတယ်၊ အမွေးထူနေတယ်၊ ​​ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့တီရှပ်တွေဝတ်တယ်။ ငါတစ်နေ့တာမှတဆင့်ငါ့လမ်း huff နှင့် puff ။ အွန်လိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပန်းတိုင်များနှင့်အညီမိမိကိုယ်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်အခြားသူများကကျွန်ုပ်အားနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်အားသိမြင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မည်သို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ငါပြောတာမဟုတ်ဘူး တလွဲ ငါကိုယ်တိုင် ... ငါမသိဘူး ကျွန်တော်မလုပ်ဘူး ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များအားလိမ္မာပါးနပ်စွာထားရှိရန်ဂရုပြုပြီး f-bombs များကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ထင်ထင်ရှားရှားနှိမ်နင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ပါ။ သူတို့မှားတယ်လို့သူတို့ကိုငါပြောကောင်းပြောမယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငါလေးစားဆဲ။ 🙂
အဲဒီမှာရောက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဘယ်တော့မှမရပ်ပါနဲ့။ ငါအလုပ် / ဘဝချိန်ခွင်လျှာကိုမယုံဘူး။ ငါလုပ်နေတာကိုကြိုက်ပြီးနေ့တိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုချင်လို့ပါ။ ငါအရမ်းပျော်စရာနှင့်မိသားစုအချိန်အများကြီးရှိသည်။ သို့သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်တစ်နေရာရာသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကြိုးစားနေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမစွန့်စားပါ။ သူငယ်ချင်းများ
အခွင့်အရေးတိုင်းမှာတက်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ဘလော့ဂ်၊ guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်၊ မှတ်ချက်ရေးရန်၊ ရေးရန်၊ ပြောဆိုရန်၊ တိုင်ပင်ရန်၊ ငါထင်တာကတော့အောင်မြင်မှုရသူများစွာနဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြီးဆုံးခွဲခြားမှုကတော့အဲဒါကိုရုန်းကန်နေသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အကြောင်းသဲလွန်စမရှိသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်မိန့်ခွန်းပြောရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်ခုန်လိုက်သည်။ ငါဂူးဂဲလ်ကိုတူးဖော်မယ်၊ ကျွမ်းကျင်သူအချို့ရှာမယ်၊ တင်ဆက်မယ်။ ငါဘုတ်အဖွဲ့အတော်များများတွင်ပါဝင်ပြီးမည်သည့်နေ့၌မဆိုဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှကုမ္ပဏီများနှင့်လူများကိုကူညီသည်။
သင့်ရဲ့ပေးပို့ခြင်းအတွက်ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်လိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကအစည်းအဝေး၌အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး အား“ မင်းကိုသဘောမတူလို့ငါမပြောဘူး၊ မင်းကမှားနေလို့မင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး” ဟုအစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်အကြံပေးတစ် ဦး အားပြောကြားခဲ့သည်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့အသံ - ငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်လေးကလေကိုလှန်လိုက်ပြီးသူကသူ့ရယ်စရာမကောင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်များကိုဆက်မပြောတော့ဘဲသူ့ကိုအချက်အလက်တွေထဲစတင် ၀ င်လာတယ်။ ငါအမြဲတမ်းမှမဟုတ်တာ၊ ငါမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုအရ၊ ကျွန်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့၊ ဒီရှေးရှေးတွေအများကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ငါသူတို့ကိုနားထောင်ဖို့အသက်ကြီးလွန်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါရသမျှအခွင့်အရေးအားလုံးကိုသူတို့ကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်အချို့လုပ်နိုင်ကြသည်။
သင့်ကိုနှောင့်ယှက်နေသောလူများကိုနားမထောင်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအကြောင်းပြောသောအခါအမေသည်ညည်းတွားနေသည်။ သက်သာခွင့်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အငြိမ်းစားယူခြင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ကြေငြာချက်ကိုချက်ချင်းလိုက်လျှောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အမေနှင့်စကားမပြောခဲ့ပါ ရှေ့မှာ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည် သူကကျွန်မကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုမယုံဘူး။ ဟမ်? အဲဒါအဆင်ပြေပါတယ်။ ငါလည်းအဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ ငါလည်းသူမကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့လည်းချစ်တယ်။ သူမသည်ရိုးရိုးလေးပဲ။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများလည်းအလားတူလုပ်ဆောင်နေကြပေမည်။ သူတို့ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအဆိပ်ဖြစ်စေတယ်။
အမှတ်တံဆိပ် You ®
Update ကို: Kristian Andersen မှာမှာစိတ်ကူးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်စကားပြော ဤတင်ပြချက်တွင် (၎င်းကိုထောက်ပြသည့်အတွက် Pat Coyle ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်):
ဒီမှာအရာရာကိုဘယ်လိုချဉ်းကပ်တယ်ဆိုတာဥပမာတစ်ခုပါပဲ… Andy's ကိုဖတ်ပါတယ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Pilgrim Marketing Pilgrim သည် Marketing Executives Networking Group (MENG) အတွက်အကြံပြုထားသောဘလော့ဂ်များစာရင်းတွင်ဖြစ်ရန်ရွေးချယ်ထားသောဘလော့ဂ်။ ၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်။ Marketing Pilgrim သည်ကျွန်ုပ်နေ့တိုင်းဖတ်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါက ... ငါစာရင်းတွင်ချင်တယ်။ 🙂ဒါဟာယှဉ်ပြိုင်မှုပြnotနာမဟုတ်ဘူး၊ ရည်မှန်းချက်ပဲ။ ငါလိုချင်တယ် Martech Zone အင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းခံယူခံရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့စာရင်းအားလုံးအပေါ်ကောင်းစွာအဆင့်အတန်းဆက်လက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူကိုဆက်လက်ကြီးထွား ... ဒါပေမယ့်ငါချင်တယ် ထို စာရင်း!
ငါပြီးပြီ အောက်ပါ အချို့သော of ထို ဘလော့ဂ်များ နောက်လာမည့်နှစ်တွင်အခြားဘလော့ဂါများနှင့်အခြေအနေကိုဆက်သွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်များ၊ ဖြစ်ရပ်များမှတစ်ဆင့်၊ သူတို့၏အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာများကိုတွစ်တာများနှင့်၎င်းတို့သည်အလွန်ကြီးသောပို့စ်များရှိသည့်အခါသူတို့နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ငါသွားမယ် အင်အား ကိုယ့်ကိုကိုယ်သူတို့ကွန်ယက်ထဲကို
အင်အားသည်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်၊ သို့သော်မဟုတ်ပါ။ မင်းဆိုရင် အရာဝတ္ထုတခုလုံးကိုဆက်ပြီးရွေ့လျားသွားလိမ့်မည်။ လိမ်တာ၊ ခိုးတာ၊ hack တာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကွန်ယက်ထဲကိုကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်တာမျိုးကိုလုပ်ဖို့ငါမဟုတ်ဘူး။ ငါပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်အထိငါသူတို့အားတန်ဖိုးကိုစတင်ပေးသွားမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုပြီးတာနဲ့တံခါးတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်။
ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အောင်မြင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီး၎င်းမှကျွန်ုပ်အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့သည်။ ငါလည်းအရာအားလုံးကိုနီးနီးကပ်ကပ်ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။ ဒါကြောင့်ငါပိုက်ဆံထပ်မံတွန်းထုတ်နေတယ်။ ငါပိုက်ဆံအလွန်အမင်းစိတ်မပူပါနဲ့ (မရှိခြင်းသာ) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသကဲ့သို့ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှအမြတ်ထုတ်ရန်လည်းယုံကြည်စိတ်ချသည်။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင့်ကိုသင်ကြည့်ရှုလိုသည့်နည်းလမ်းကိုတင်ပြပါ၊ ကြိုးစားပါ၊ အခွင့်အလမ်းတိုင်းတွင်တက်လှမ်းပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပါ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းသင့်အားပြောပြရန်မည်သူ့ကိုမျှမစောင့်ပါနှင့်။
Tags: မင်းကိုအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှတ်တံဆိပ်ka + aပြောရမှာခရစ်ယာန် andersenပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်PowerPointတင်ဆက်မှုslideshare
ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြင့်အလွန်သေးငယ်သော ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲခြင်း
ဇန်နဝါရီ 13, 2010 မှာ 11: 08 AM
ကောင်းပါတယ် Doug၊ ငါတန်ဖိုးအားဖြင့် "Force" ကိုနှစ်သက်တယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ